သာလွန်ဇောင်းထက်| November 23, 2012 | Hits:1
| | ပုံမှန်အားဖြင့် အဆိုတွေ၊ မေးခွန်းတွေ မြောက်မြားစွာကို မေးကြ၊ ဖြေကြနဲ့ နေ့စဉ် အလုပ်များနေတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေး ခန်းမဆောင်ကြီးမှာ နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့ကတော့ အဆိုတခုတည်းနဲ့တင် လွှတ်တော်တခုလုံး အလုပ်ရှုပ် ဗြောင်းဆန် သွားခဲ့ပါတယ်။
ADB က မြန်မာကို ချေးငွေ ဒေါ်လာသန်း ၅၆၀ ပေးထားသီလ၀ါ အထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ကုမ္ပဏီ ၂၁ ခု လက်မှတ်ထိုးတရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး စင်တာများ မန္တလေးနှင့် လားရှိုးတွင် ရှေ့ပြေး ဖွင့်လှစ်မည်အဓိကရုဏ်းတွေ ထပ်ဖြစ်လေမလားမဖြူနှင်းထွေး လွတ်မြောက်ရေး မန္တလေးနှင့် ရန်ကုန်တွင် ဆန္ဒပြ ၀တ်ပြုဆုတောင်း
22 Responses LeaveaReply Cancel reply
zaw min oo November 23, 2012 - 5:12 pm စက်သုံးဆီကိုပြည်သူတိုင်းတင်သွင်းခွင့်ရယငအခွန်ရပြီးဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်ယခုကဲ့သို့ပြသနာမကြုံပါလက်ဝဲကြီးအုပ်တာကင်းရှင်းသွားမယ်
ReplyaNovember 23, 2012 - 6:28 pm အခြေခံဥပဒေနဲ့အကာအကွယ်ယူထားလိုက်ရင်လုပ်ချင်တာလုပ်ခဲ့တာတွေပြီးသွားပြီ၊လွတ်သွားပြီလို့ထင်နေကြပုံပဲ။တကဲ့ကောင်တွေ။အခုဒီကောင်တွေပဲအုပ်ချုပ်နေတယ်ဆိုတော့တိုင်းပြည်အတွက်တွေးသာကြည့်ကြပါတော့။
Reply swe htwe November 23, 2012 - 8:29 pm Hluttaw is doing the right thing.
Reply pps12345 November 23, 2012 - 11:18 pm (၁)အရင် အစိုးရ လက်ထက်က ညွှန်ကြားချက်တွေ ဖြစ်တဲ့ စတစ်ကာ မကပ်ရ၊ ဆိုင်ကယ်မစီးရ စသော ဥပဒေတွေကို ပြဌာန်းခဲ့ပါတယ်။ ချွင်းချက် အနေဖြင့် ဥပဒေ အပေါ်တွင် ရရှိသောဝန်ကြီးနှင့် ဗိုလ်ချုပ်သားသမီးများ လုံခြုံရေး အကြောင်းပြကာ စတစ်ကာ ကပ်ခွင့်ရရှိပါတယ်။ ထိုကားများတွင် သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ ထုတ်ပေးထားသော ထောက်ခံစာ ပါပါသည်။ ထို ထောက်ခံ လက်မှတ်များကြောင့် အောက်ခြေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ စစ်ဆေးနိုင်ခြင်းမရှိပဲ ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ရကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ထို အခွင့် အရေးကို အသုံးချကာ လူကြီး သားသမီး ဆိုသူများက စတစ်ကာ ကပ်ကားများဖြင့် ဥပဒေ ပြင်ပရှိ ပစ္စည်းများ တင်ဆောင် ရောင်းဝယ်ကြကြောင်း ကြားဖူးပါသည်။ ကျွန်တော်သိချင်သည်မှာ ထိုဗိုလ်ချုပ်များ တိုင်းပြည် ကို မည်ကဲ့သို့ အကျိုးပြုထားသဖြင့် ထိုအခွင့်အရေး များ ရရှိနေသနည်း ဆိုတာဖြစ်ပါသည်။ ဆောင်းပါးရှင်ဖြေကြားပေးပါ။
Reply ဖိုးခွါး November 23, 2012 - 11:33 pm မြ၀တ်ီနယ်စပ်မှာလည်း ရွှေသံလွင် ကုမ္ပဏီက ပတ္တမြား ဓာတ်ဆီဆိုင်၊ နောင်ရိုးဓာတ်ဆီ ဆိုင်တွေကနေ သောင်ရင်းမြစ်တဖက်ကမ်းမှ ဆီများ တရားမ၀င်နေစဉ်တင်သွင်းနေပါတယ်။
Reply ဖိုးဇော် November 23, 2012 - 11:41 pm လွှတ်တော်ထဲရောက်နေတဲ့ ရွှေဘ။
Reply ဖိုးဇော် November 23, 2012 - 11:42 pm ရွှေဘလို့ဆိုလိုက်ရင် စကခ(၈)က သူတွေအားလုံးသိပါတယ်။
Reply မောင်မောင် November 24, 2012 - 3:31 am သူရဦးရွှေမန်း အနေနဲ့ ဒီကိစ္စကို ထိရောက်ပြတ်သားစွာ ကိုင်တွယ်နိုင်မှသာ ၂၀၁၅အတွက် ပြည်သူတွေရဲ့ ကိုးစားယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်နိုင်မှာပါ။
Reply ကိုကိုကြီး November 24, 2012 - 1:29 pm အထှုးဖွဲ့ဖွဲ့စစ်သင့်တယ်။အဖွဲ့ကတိုက်ရိုက် သမ္မတနှင့်mediaကိုတိုက်ရိုက်အစီရင်ခံသင့်တယ်။
Reply pps12345 November 24, 2012 - 11:12 pm ကိုကိုကြီးရေ ။ သမ္မတ ဆီကို အစီရင်ခံရင်တော့ သမ္မတရုံး ဝန်ကြီး တစ်ယောက်က fabricate လုပ်လိုက် လို့ တရားလို ကတရားခံ ပြန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ သမ္မတရုံး မှာ မြွေပွေးတွေ ရှိတယ်ဗျ။
Reply bluetrogon November 24, 2012 - 2:35 pm အဲဒီ အချိန်တုန်းက မှောင်ခိုဆီသဘောတစ်စီး ဖမ်းဆီးခံရမှု အတွက်ပြန်လွတ်ပေးနိုင်ရန် အတွက် အဲဒီအမိန်.ကိုထုတ်ခဲ.တယ်လို.သိရတယ် ဒီအမိန်.ရဲ. နောက်ကွယ်မှာ အဂတိလိုက်စားမှု လဒ်ငွေ အမြောက်အများ ယူခဲ.တာတွေ အားလုံးသိကြပါတယ်
Reply foxy November 24, 2012 - 8:30 pm Other case is post on moemaka web-page by case of kyawsan co ltd.
Reply foxy November 24, 2012 - 9:37 pm Dr. Win Myint right.
Reply Kyauk November 24, 2012 - 10:48 pm ဒေါက်တာဝင်းမြင့်ဆိုတာစက်သုံးဆီလောကမှကျားကြီးထင်တယ် ဒါဆိုသူ့ တင်သွင်းတဲအဆိုကို ကန့် ကွက်သင့်တာလွတ်တော်ကအမတ်တွေမသိကြတာနေမှာပါ စက်သုံးဆီလောကသားများဘယ်သူမှမယုံရဘူး ပြည်သူနဲ့ နိုင်ငံအတွက်မဟုတ်တာသေခြာတယ် ဒါသူ့ အကြိုးအတွက်ပါရမယ်သေ. သူမြို့ နယ်ကပြည်သူတွေကံဆိုသဟေ့ အင်းစက်သုံးဆီလောကသားများသတိထားကြဟေ့ သိပ်ကြောက်ဖို့ ကောင်းတဲ့ကြောင်သူတော်နော်. ခေါင်းပေါင်းကြီးနဲ့ နော်
Reply mathae myin November 29, 2012 - 9:06 am Kyauk, you are one of Muzaw’s partner?
Reply လူမှန် November 25, 2012 - 12:29 am စက်သုံးဆီမှောင်ခိုအကြောင်းဖက်ရတာများနေပြီ ကျောက် သစ် စတဲ့သတင်းကိုဖက်ချင်တာဘယ်သူမှမတင်ပြကြပါလား တကယ်တော့စက်သုံးဆီတင်သွင်းမူ့ ပမာဏလျော့ကျတာမှောင်ခိုနဲ့ တိုက်ရိုက်မသက်ဆိုင်တာဦးဝင်းမြင့်မသိတာလုံးဝမရိုးသားဘူးလို့ ထင်တယ် ဂျာနယ်တခုကသူ့ ကိုမေးထားတာဖက်လိုက်ရတာတလွဲဖြေထားတာတွေ့ လိုက်တယ် တကယ်တော့စက်သုံးဆီတင်သွင်းမူ့ လျော့ကျတာဖါးကန့်ဒေသပိတ်လိုက်လို့ ဆိုတာသူသိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဆီသုံးစွဲ့ပမာဏရဲ့ ၇၀%ဟာဖားကန့် ဖြစ်နေတာမသိချင်ရောင်ဆောင်နေတဲ့ လွတ်တော်မှာတင်ပြပေးရမှာကိုက မရိုးသားတာ ၎င်းဒေသကိုတင်ပို့ ဖြန့် ဖြူးရောင်းချကြတဲ့ တလကိုတန် ၃/၄သောင်းသွင်းတဲ့ ကုပမဏီကြီး၃/၄ခုကလျော့ ကျသွားတဲ့ တန်ဟာ တလကိုအနည်းဆုံး(၅၀၀၀၀)ရှိတယ် ဘာ့ ကြောင့်အဲဒီလောက်သုံးစွဲတာလဲသိရင်ရူပ်ကုန်တော့မယ် နဲနဲတော့ပြောပြမယ်. ၎င်းဒေသရဲ့ တရားဝင်လုပ်ကိုင်ခွင့်က စက်ကြီးများမပါ လက်ဖြင့်သာတူးပါ. တကယ်တူးတော့ စက်ယနနယားကြီးများနဲ့ (၂၄ )နာရီ ဒုတိယဟောင်ကောင်လို့ တောင်တင်စားခံရတဲ့ ဒေသ ၇၀%သုံးအားတွက်တာကြည့်. ၎င်းကုပဏီကြီး၃/၄ခုရသွားတဲ့ ကျောက် ၁ တုံး ပမာဏက ၆၀ ဘီလီယန် ရဲ့ အစွန်းထွက်လောက်ရှိမယ် သစ်လုပ်ကွက်တွေလဲ%တော်တော်လျော့ချထားတာနော်. ဆင် နဲ့ လား. စက်နဲ့ လား စဉ်းစားကြည့်ပေါ့$ ဘီလီယန်ဆုံးရူံးနေတာဦးဝင်းမြင့်သိသင့်တာပေါ့ဗျာ. အချက်အလက်စုဆောင်ဆဲမို့ ဒီလောက်ပါပဲ. နောက်ဆောင်းပါးရေးတော့မှပြည့်စုံစွာဖော်ပြပါမည်။. လူမှန်
Reply nge nge November 25, 2012 - 12:30 am New Day ဆီဆိုင်တွေမှာလဲ လူအကြီးကြီးတွေရဲ့ရှယ်ယာတွေပါတယ်ဆိုပဲ။
Reply နေမင်း November 25, 2012 - 10:01 am ဘယ်လိုလဲ လူမိုက်မောင်ဦး၊ အပြောသမား ရွှေမန်းက ကိုယ့်ဘက်မလှည့်အောင် ကိုင်တွယ်သွားမှာပါ။ စိတ်ချရတဲ့လူမဟုတ်ပါ။
Reply yemyin November 25, 2012 - 4:27 pm Every military government destroy the country on the world.This is universal truth. Than Shwe destroy the justice.Khin Nyunt destroy the Education and all army general done lead to poor country for Myanmar (Burma) by administration.
Reply foxy November 25, 2012 - 9:35 pm Congratulation Dr.Win Myint.
Reply Myanmar Pyithar November 26, 2012 - 11:24 am Ask Moe Hay Ko’s so-called Ex- Nyi Nyi Tun.
Reply burmathwe November 28, 2012 - 11:17 am ဦးဝင်းမြင့် နောက်ထပ် အောက်ဖဲတွေလဲများများလှန်ဗျာ….ရွှေမန်း၊တေဇ၊အောင်သက်မန်း၊တိုးနိုင်မန်း၊ခင်ရွေ တို့ အပေါင်းအပါလူတစ်စု ရဲ့ အောက်ဖဲတွေလဲလှန်ပြအုံး၊